Robert Lewandowski iyo Xaaskiisa oo lacago ku bixinaya ka hor tagga Caabuqa Coronavirus – Gool FM
(Munich) 22 Mar 2020. Weeraryahanka Kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski iyo xaaskiisa Anna ayaa ku dhowaaqay inay lacag hal milyan oo euro ah kaga qayb qaadanayaan ka hortagga caabuqa Coronavirus.
Lammaanahan ayaa lacagta ku hagaajinaya hay’adda We Kick Corona fund ee ay aas-aaseen saaxiibbadiis Leon Goretzka iyo Joshua Kimmich.
“Dhammaanteen waan ka war qabnaa xaaladaha adag ee nagu hareersan,” ayuu Lewandowski ku qoray bartiisa Instagram-ka.
“Maanta waxaan u wada ciyaarnaa hal koox.
“Aan u xoogsanno dagaalkan, haddii aan qof caawin karno, aan caawinno.
“Waxaan go’aansannay inaan hal milyan oo euro aan kaga qayb qaadanno dagaalka ka dhanka ah coronavirus” ayuu qoraalkiisa ku sii daray gool dhaliyaha Kooxda Bayern Munich.
Weeraryahanka reer Poland ayaa u soo jeediyay bulshada caalamka inay u hoggaansamaan tilmaamaha la siiyay, waxaana uu sidoo kale rajo wacan ka muujiyay in dunida ay ku soo laabaneyso nolosha caadiga ah.
Kooxo kala duwan, ciyaartoy hore oo kubadda cagta ah iyo shaqsiyaad kale oo ku ab-tirsada kubadda cagta ayaa siyaabo kala duwan kaga qayb qaadanaya dadaallada lagu xakameynayo faafitaanka caabuqa Coronavirus.